Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A August 2011 (3)
Q and A August 2011 (3)
၁။ ကလေး၏ သွေးအမျိုးအစား သိချင်ပါတယ်
၂။ Atarax ဆေးက ဘာအတွက် သောက်ရတာလဲ
၃။ အရေပြား ဖြတ်ချင်တာ ဖြတ်သင့်လား မဖြတ်သင့်လား
၄။ ဆီးသွားပြီး ဆီးကုန်ုခါနီး သွေး tea spoon သုံးပုံ တစ်ပုံ ပါပါတယ်
၅။ ထိပ်ကပ်နာ (Sinus) ဝေဒနာကို ခံစားနေရပါတယ်
5 Aug 11, 20:43
မိဘ၏ သွေးက အို နှင့် အေဘီ ဆိုလျှင် ကလေး၏ သွေးအမျိုးအစား သိချင်ပါတယ်။
A ဒါမှမဟုတ် B ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Blood group of parents Blood group of child
5 Aug 11, 19:31
Atarax ဆေးက ဘာအတွက် သောက်ရတာလဲ။ ကျနော် အခု Imipramine သောက်နေရလို့ပါ။ Imipramine က ဝေဒနာ မရှိပဲ သောက်လို့ ရှိရင် ဘယ်လို ခံစားရပါသလဲ။
(၁) Hydroxyzine (Vistaril, Atarax) ဟာ ပဌမပေါ် Antihistamine (အင်တီဟစ်တမင်း) ဆေးဖြစ်တယ်။ ယားတာ၊ အလာဂျီ ရတာ၊ နာတာမခံနိုင်တာ၊ ကားစီး၊ လေယာဉ်စီးလို့ ပျို့-အန်ချင်တာ၊ အိပ်မပျော်တာ၊ စိတ်လှုတ်ရှားမှု နဲနဲဖြစ်တာတွေအတွက် သုံးတယ်။
(၂) Imipramine (Antideprin, Deprimin, Deprinol, Depsol, Depsonil, Dynaprin, Eupramin, Imipramil, Irmin, Janimine, Melipramin, Surplix, Tofranil) ဆေးဟာ နာမည် အမျိုးမျိုးနဲ့ လာတယ်။ Melipramine လို့လဲ ခေါ်တယ်။ စိတ်ဓါတ် ကျနေသူတွေကို ပေးတယ်။ depression အပြင် enuresis ဆီးခဏခဏ သွားချင်နေသူမျိုးကိုလဲ ပေးနိုင်တယ်။ ဘေးထွက်-ဆိူကျိုးတွေ = ပျို့၊ အိပ်ချင်၊ မော၊ အားယုတ်၊ စိုးရိမ်၊ အိပ်မက်ဆိုးမက်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ အစားစားချင်စိတ်ပြောင်း၊ ဝမ်းချုပ်၊ ဆီးသွားရခက်၊ ဆီးသွးချင်၊ မျက်စိ ကြည့်မကောင်း၊ လိင်စိတ် ပြောင်းလဲ၊ ချွေးထွက်များ။
4 Aug 11, 14:04
ကျွန်တော် အသက် ၂၈ နှစ်ပါ လိင်တံ အရှေ့ အရေပြား ဖြတ်ချင်တာ ဖြတ်သင့်လား မဖြတ်သင့်လား အကြံ ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Circumcision ပန်းအဖျား လှီးဖြတ်ပေးခြင်း အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၃) ကို ပို့လိုက်ပါတယ်။
ကျနော် အသက်၂၃ နှစ်ပါ။ အခု (့) မှာ အလုပ် လုပ်နေပါတယ်။ ဒီနေ့ ကျနော် ဆီးငါးကြိမ်သွားရာမှာ နောက်ဆုံး ၂ ကြိမ်မှာ ဆီးသွားပြီး ဆီးကုန်ုခါနီး သွေး tea spoon သုံးပုံ တစ်ပုံ ပါပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုပါလဲ။ စိုးရိမ်ရသလား။
အရင် ဖြစ်ဘူးသလား။ ဆီးသွားတော့ နာသလား။ ဆီးထဲမှာ အနယ်ပါသလား။ အစားအသောက်မှာ ဥပမာ ဒညင်းသီးလိုမျိုး စားလိုက်မိသလား။ ဆီးစစ်သေးလား။
ကျွန်တော် အခု ထိပ်ကပ်နာ (Sinus) ဝေဒနာကို ခံစားနေရပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်ကတည်းက ခံစားရခဲ့တာပါ။ အဲဒီအချိန်က မြန်မာပြည်မှာ ဆေးခန်းသွားဖို့ အခက်အခဲ့ရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျေးလက်ကျန်းမာရေး လက်စွဲ စာအုပ်ပါ အကြောင်းအရာများနဲ့ ဆေးဝါး အညွန်းတွေကို ကိုယ့်တိုင်လေ့လာပြီးတော့ သောက်သုံးခဲ့လို့ ပျောက်သွားပါတယ်။ အခုတဖန် ဒီဝေဒနာက ပြန်စချင်နေတယ်။ အာခေါင်တွေ ခြောက်ပြီးတော့ နာတယ်၊ နာစေးတယ်၊ အဝါရောင် အရည်တွေ အထွေးလိုက်ကျတယ်၊ ခေါင်းတော့ သိပ်မကိုက်ဘူး။လောလောဆယ်တော့ CONTAC 500 ဆေးကို သောက်နေပါတယ်။ ဆေးဝါးကောင်း အမျိုးအမည်နဲ၊ ဘယ်လို သောက်သုံးသင့်တယ်၊ ဘယ်လို နေထိုင်သင့်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို သိချင်ပါတယ်။
1. Q and A August 2010 (2)
(Q and A/Q and A)
... ဘယ်လို ကုသပျောက်ကင်းနိုင်မယ် ဆိုတာကို ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပါနော်။ ၁။ Sinusitis သို့မဟုတ် ကိုရီးယား ကလာသည့် မေးခွန်းအား ဖြေကြားခြင်း ၂။ Allergy သို့မဟုတ် မတည့်အတူနေ ၃။ Allergy medications (အလာဂျီ) ကို ...
2. Respiratory tract infections (1)
(Medical Writings/Medical Writings )
... Cephalexin 25-50 mg/kg BD x 10 days); 6. Ceffadroxil 30 mg/kg BD x 10 days); 7. Azithromycin 12 mg/kg QID x5days) • Rhinitis ဆိုတာ နှာခေါင်း အဖုံးလွှာတွေ ရောင်တာ၊ • Rhinosinusitis or Sinusitis ဆိုတာ ...
3. Q and A July 2011 (14)
... နှပ်ညှစ်ရာက သွေးကြေားလေးတွေ ပေါက်လို့ ဖြစ်မှာပါ။ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ။ ရာသီဥတုကို ရိုးမယ်ဖွဲ့ရဘို့ များပါတယ်။ ၁။ Sinusitis သို့မဟုတ် ကိုရီးယား ကလာသည့် မေးခွန်းအား ဖြေကြားခြင်း ၂။ Allergic rhinitis အလာဂျီ ...
4. Q and A July 2011 (12)
... ဘယ်လို ကုသမလဲ • Rhinitis နှာခေါင်းရောဂါ • Sinusitis သို့မဟုတ် ကိုရီးယား ကလာသည့် မေးခွန်းအား ဖြေကြားခြင်း • Allergic rhinitis အလာဂျီ နှာခေါင်း • Allergy သို့မဟုတ် မတည့်အတူနေ တွေကိုလဲ အချိန်ရရင် ဖတ်စေခြင်ပါတယ်။ ...
5. CT scans increase cancer risk
(Health News Update/Health News Update)
... poor women ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် လိင်ဆက်ဆံသူများ သားအိမ်အဝ ကင်ဆာ ပိုဖြစ်စေနိုင်။ Endoscopic surgery improves chronic sinusitis patients' quality of life ထိပ်ခတ်နာ ခေါ် နှာခေါင်းပိတ်ရောဂါကို ကရိယာထည့် ခွဲစိတ်နည်း ...
6. Medicine for Pneumonias and Respiratory Tract Diseases
... = Erythromycin 250 mg QID; Benzarthine penicillin G 1.2 million units IM asasingle dose; Penicillin VK 500 mg QID or Amoxacillin 750 mg BD • Acute Sinusitis ဆိုင်းနပ်စ်၊ = Amoxacillin 500 mg Orally TDS ...
7. 6-10-09 Cosmetic eyelid surgery
Cosmetic eyelid surgery improves patients' quality of life အပေါ်မျက်ခွံ အိကျနေခြင်းအား လှပစေရန် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်းကြောင့် လူ့ဘဝပါ ပိုမိုလှပစေသည်။ Chronic rhinosinusitis patients going for alternative medicine ...
8. Q and A September 2010 (5)
... သမီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ မရှိလို့ပါ။ (ခန့်မှန်းကြည့်တာပါဆရာ)။ သမီးရဲ့ နှာခေါင်းကတော့ တော်တော် Sensitive ဖြစ်တာ အရင်ကတည်းကပါ။ ရေးပြီးသာ ၃ ပုဒ် ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုသေးရင် မေးပါ။ Sinusitis သို့မဟုတ် ကိုရီးယား ...
9. Q and A January 2011 (8)
... • Sinusitis သို့မဟုတ် ကိုရီးယား ကလာသည့် မေးခွန်းအား ဖြေကြားခြင်း တွေကို ဖတ်ပါ။ လိုသေးရင်မေးပါ။ Jan 26, 2011 at 9:02 AM ကျွန်တော့် အသက် (၃၇)နှစ်ရှိပါပြီ ကျွန်တော့်အသက်(၁၇)နှစ်ခန့်က လိပ်ခေါင်းရောဂါ ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ ...
10. Q and A March 2011 (8)
... အားယုတ်၊ ဗိုက်အောင့်၊ ဝမ်းပျက်၊ မျက်စိနီ-ယား။ • Rhinitis နှာခေါင်းရောဂါ • Sinusitis သို့မဟုတ် ကိုရီးယား ကလာသည့် မေးခွန်းအား ဖြေကြားခြင်း • Allergic rhinitis အလာဂျီ နှာခေါင်း • Allergy သို့မဟုတ် ...
11. Sinusitis သို့မဟုတ် ကိုရီးယား ကလာသည့် မေးခွန်းအား ဖြေကြားခြင်း
... (အလာဂျီ) ဖြစ်ခြင်း၊ ၂။ Acute or Chronic Sinusitis (Ethmoiditis) ရက်တို-ရက်ရှည် (ဆိုင်းနူဆိုက်တစ်) မျက်ကွင်းအပြင်ဘက်ရိုးရောင်ခြင်း၊ ၃။ Chronic Frontal Sinusitis (Chronic Rhinosinusitis) နာတာရှည် (ဆိုင်းနူဆိုက်တစ်) ...
12. Infection (အင်ဖက်ရှင်) ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း
... ဝင်ခြင်း၊ Osteomyelitis အရိုးအတွင်းရောင်ခြင်း၊ Ottitis Media နားပြည်ယိုခြင်း၊ Sinusitis ဆိုင်းနပ်စ်၊ Meningitis ဦးနှောက်မြှေး ရောင်ခြင်း၊ or Brain Asscess ဦးနှောက် ပြည်တည်ခြင်း၊ Acute rheumatic fever ...
13. Antibiotics ပဋိဇီဝဆေးများ
... Clarithromycin, Azithromycin, Roxithromycin, Troleandomycin တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ Pharyngitis အာခေါင်နာ၊ Sinusitis (ဆိုင်းနပ်စ်)၊ Bronchitis လေပြွန်ရောင်၊ Genital infections မျိုးပွါးလမ်းရောင်၊ Gastrointestinal ...
14. Allergic rhinitis အလာဂျီ နှာခေါင်း
... Sinusitis သို့မဟုတ် ကိုရီးယား ကလာသည့် မေးခွန်းအား ဖြေကြားခြင်း “မချစ်ခင်-မနှစ်သက်သူနှင့် အတူနေရခြင်း ဆင်းရဲ” က လွန်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။